रामराज्य पक्का - परिहास - नेपाल
कोही नछुटून् । लोकतन्त्रको यस मूलमन्त्रलाई प्रदेशसभा र संघीय सभाको चुनावले मज्जाले शिरोधार्य गर्‍यो । अपराधी, भ्रष्टाचारी, दलाल, ठेकेदार जम्मैको प्रतिनिधित्व छ, दुवै संसद्मा । जगजाहेर छ, यस्ता समुदायको समुचित प्रभाव भएको ठाउँमा सुरक्षाको खतरालाई नजरअन्दाज गर्न मरिकाटे मिल्दैन । तर, हाम्रा नेताहरु कहाँ कम छन् र ? माननीयहरुको असुरक्षाबाट बच्न सरकारमै ‘बडीगार्ड’ पठाइसके । प्रदेश–३ का अनुभवी बडीगार्ड युवराज दुलाललाई मन्त्री बनाएपछि सबैले हाइसञ्चो मानेका छन् । बडीगार्ड पनि चानचुने नेताको हो र ? एक दशक गुरिल्ला–युद्ध लडेको पार्टीका सर्वोच्च नेता कमरेड प्रचण्डलाई सुरक्षित राख्नु फलामको चिउरा चपाएसरह हो । अपराधी, डन, गुण्डा, फटाहाहरुको हुल संसद्मा छिर्‍यो भनेर सबै त्राहिमाम थिए । अब यस्ता सांसदहरुबाट प्रदेशलाई मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई जोगाउने निश्चित छ । रामराज्य पक्का ।